Basic izici lobuchwepheshe, ithonya lapho kudingeka B15 ukhonkolo isici zokuphepha. Zonke ezinye izindawo izoncika kakhulu uhlobo ingxube esetshenziswa. Ngokwesibonelo, ngesikhathi emakamu low kasimende kungaba isukela imingcele ukuqina. I kwabantu of ngalezi zithako elinesimo neku- yamathebhu yengezwe ngesimo lime, amatshe noma egwadle olwembiza. Inketho yokugcina ubhekwa eqolo, ngakho isicelo yayo kuyaqabukela wenziwa B15 ukhonkolo. Intengo kuleli cala luyanda ngokwezinga elikhulu. Uma ngokuqinile ulandele ekwakhiweni, ke ayifakiwe inqubo yokulungiselela okuqukethwe ukungcola ahlukahlukene nezinye amanyela.
Ngokungafani esindayo analogue, ukhonkolo B15 kudinga cishe akukho ukufakwa kwezithako ekhethekile. Lokhu akusebenzi nje kuphela ukuba izingxenye, ekuvimbeleni okokuqandisa ingxube sokugcina. Amandla zithako ubhekwa ukwanele idivayisi ye screeds ukhonkolo ukwakhiwa elisekela namaculo. Isikhathi esining impela, isetshenziswa ekwakheni ama-plate umgwaqo, kanye PBS amayunithi. Ngo isakhiwo ngabanye ke ngenkuthalo esetshenziswa uma ukusakaza izinhlobo ezahlukene izisekelo kanye ekwakheni izakhiwo ezihambisana.
Namuhla isigaba ukhonkolo B15 kwaba omunye ethandwa kakhulu esikhathini isakhiwo ongaphakeme liphumele. Kuba buyindlela esisemqoka ukwakhiwa suburban, ukunakekela izindleko elincane izinga siwusizo kakhulu. Ngakho, Inzuzo enkulu ukhonkolo okwaleso ibanga lilinganiselwe izindleko ongaphakeme omuhle kakhulu ukuqina izici.
Nokuzibona ukwakhiwa yendlu noma yimuphi omunye izakhiwo kumele amaphesenti of izimpahla ezisetshenziselwa ukulungiselela ingxube ezaziwayo. Proportionality kuzo zonke izingxenye udlala indima ebalulekile isisekelo kudivayisi, njengoba ukhonza njengephayona isisekelo yiliphi ibhilidi. Ukuze ukuqinisekisa impilo ende inkonzo yazo zonke izakhiwo, kufanele kuqashelwe ngesisekelo, akulungise B15 kahle ukhonkolo. Sinenkosi izimfanelo ezinhle ukuhlubula izisekelo, kodwa kukhona izinketho ngesimo zikasimende noma imigoqo.
Ukwakheka iyiphi mix ukhonkolo siqukethe: amanzi, yamathebhu futhi isibopho. Usimende izenzo njengoba isakhi zokugcina. Ukuthola abasebenzi izinga kungaqinisekisa brand futhi M200 ngenhla, nakuba indlu encane izwe ngempela ofanele futhi M150. Njengoba ojwayelekile, iyunithi usimende akhawunti ngalinye amayunithi ezintathu nane yesihlabathi esilinganayo yamathebhu. Lapho ukulungele B15 ukhonkolo hhayi okuqukethwe nezinye ukungcola avunyelwe ngesimo utshani, inhlabathi kanye nezinye inclusions angaphandle. Mixer efiselekayo ugovuze ingxube qualitatively. Ngesandla kuzuzwe umphumela omuhle kuyinkinga. Zonke izingxenye kufakwe Ukwakheka kukhona izinto inequigranular ukuthi kumelwe nakanjani nombala ugcwalise zonke voids.
Incazelo kanye nemiyalelo yokusetshenziswa kwe "Nixar"
Ukuhlobisa kwe-mastic - ukufunda indlela yokwenza bebodwa
Uleyisi iDemo Wedding Dress (ifotho)